प्रेरक प्रसंग : अब्राहम लिंकनको सफलता रहस्य — Motivatenews.Com
प्रेरक प्रसंग : अब्राहम लिंकनको सफलता रहस्य
काठमाडौं – मानिस सफल हुनका लागि आत्मविश्वास आवस्यक पर्दछ । हामी आत्मविश्वासविना कहिले पनि अगाडी बढ्न सक्दैनौं । हामी आफ्नो संकुचित विचारहरको सिमामै बाँधिरहन्छौं । जवसम्म त्यसलाई पार गरी विश्वासको राज्यमा पाइला राख्दैनौं, तबसम्म आफ्नो विजयको स्वप्न साँचो गर्न सक्दैनौं ।
एक मनोबैज्ञानीक सेक्सपियर वा वैब्स्टरलाई सम्भवतः तिनीहरु मुर्खबाहेक केही होइन भन्ने विश्वास दिलाउन सफल होलान् । मनुष्मया मनोबैज्ञानिकले दिएको सुझाव मान्ने शक्ति कहाँबाट आउँछ ? के मनोबैज्ञानिकले उसलाई त्यो शक्ति दिन्छ ? होइन, यस्तो होइन । वास्तवमा मनुश्यका आफ्नै शक्ति हुन्छ, जसलाई बाहिर ल्याउने काम अवश्य पनि मनोबैज्ञानिकले गर्दछन ।
यस्तै किसिमले कुनै पहलवानको मांशपेसीको असाधारण शक्ति केवल शरिरबाट होइन, बरु मनबाट धेरै आउँछ । यी मांशपेसीले यदि ती ब्यक्तिका मनबाट अलग गरिदिएमा अर्थात कुनै अर्कैको शरिरमा मात्रै लगाइदिदा पनि ती मांशपेसीले पहिलाको १० प्रतिशत वजन पनि उठाउन सक्दैन ।
हाम्रो आत्माविश्वास संगसंगै कार्यशक्ति पनि बढ्दै जान्छ । त्यसैले यदी हाम्रो विश्वासको पात्र छोटो छ भने त्यसमा इश्वरीय शक्ति पनि कम आउन सक्छ ।
अब्राहम लिंकन एक अत्यान्त नम्र एवं निरभिमान ब्यक्ति थिए । तर देशमा गृहयुद्धको बादल मडारिन थालेपछि र राष्ट्रिपतिको चुनाव पनि नजिक आइपुगेपछि अचानक लिंकनलाई त्यसवेला देशको कर्णाधार बन्ने र राज्यको बागडोर सम्हाल्ने प्रेरणा मिल्यो । त्यसैले राष्ट्रिपति पदका लागि उनले आफ्नो नाम दिए । उनले राजनीतिज्ञहरुलाई आफ्नो अन्तरआत्माले उनले संकटकालमा देशको नेतृत्व गर्न सक्ने र यस पदका लागि आफू अवस्यपनि चुनिने बताएको जानकारी दिए ।
कुनै अभिमानी ब्यक्तिको मुखबाट यी शब्द आत्माप्रशंसा न्रै लाग्दछ तर लिंकनको ह्दय सफा थियो र उनलाई आफ्नो योग्यतामाथि दृढ विश्वास थियो । त्यसै कारण उनी अमेरिकाको राष्ट्रिपति बन्न पुगे ।
इतिहासको पृष्ठमा ती ब्यक्तिहरु अमर भए, जसलाई आफ्नो जीवनको महानतामा अटल विशवास थियो । तिनीहरु आफ्ना आजको सपना भोली सत्य हुँदैछ भनेर सझन्थे । आफ्नो लक्ष्य माथि यहि दृढ विश्वासका कारण अघि बढिरहकाले ती ब्यक्तिले इतिहासमा आफ्नो नाम छोडेर गए । ती महान् पुरुषहरुको आत्माविश्वासले हामीलाई तिनीहरुको अत्भुत शक्तिको विश्वास दिलाइदिन्छ । यो सांच्चै भनिएको हो, ‘आफू कहाँ जानुपर्ने हो भन्ने थाहाँ हुने ब्यक्तिलाई संसरले बाटो छाडिदिन्छ ।’